Landa iPhakeji ye-Lockheed PV-2 Harpoon Fire Tanker FSX & P3D - Rikoooo
Play 5 093
Umbhali: By Milton Shupe, Tom Falley, Scott Thomas, Hans Naegele, Nigel Richards, Matt Wynn. Amanani okuhamba ngeJan Visser.
Umsebenzi omuhle owenziwe nguMilton Shupe kanye nababambisene naye ekugcwalisekeni kwalesi sakhiwo se-Lockheed PV-2 Harpoon Fire Tanker, leli phakethe lifakwa ngemodeli eyodwa nama-chiries amabili, imisindo eyenziwe ngezifiso, amarekhodi enziwe umuntu uqobo, ikhabethe lakhiwe ngokuphelele ku-3D kanye nePan XDUMXD ephelele. Kungenzeka ukwenza amaconsi ngegeji efakwe ngaphambili kwesengezo. Drop ihlolwe futhi isebenza nge Prepar3D i-v4 ne FSX / Steam.
Indlela yokwenza amaconsi: